Faah-faahino Uu Booliiska Soomaaliya Ka Bixiyay Qasaarahii Ka Dhashay Weerarkii Ismiidaaminta Ahaay Oo Al-Shabaab Ka Geysatay Muqdisho – Great Banaadir
MUQDISHO – Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa lagu soo waramayaa inuu faaf-faahiyay Qaraxii Barqonimadii Maanta ka dhacay Isgoyska Ceel Gaab ee Magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay in ugu yaraan ay ku Naf waayeen 8 Qofood Rayid u badnaa.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Warkiisa ku daray in Qaraxa uu ka dhasay Naftii Hallige la socday Gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa, kadibna uu isku qarxiyay Goobta Gaadiidyada lagu baaro.
Afhayeenka wuxuu Warkiisa kusii daray in Qasaaraha Dhimashada ay kasii badan karaan 8da Qofood oo Rayid ahaay isla markaan ay hada jiraan 9 Qofood oo Dhaawac dhaawac ah iyo Dad kale oo ay Reerahooda la carareen markii uu Qaraxa dhacay.
“Dadka dhintay waxaa ku jiray Hooyo haaysatay Labo Ilmood oo yar, kuwaas oo ku basbeelay Gaari yar oo ay la socdeen, Hooyaduna waxey kusii jeeday MCH (Maternal and Child Health) oo kuyaallo Isgoyska Ceel Gaab,” ayuu yiri Afhayeenka.
Dadka qaraxa ku geeriyooday, waxaa kale oo kamid ahaay Hibaaq Abuukar oo katirsaneyd Xafiiska Wasiirk Koowaadka Dowladda Xilgaarsiinta ee Soomaaliya, sida uu xaqiijiyay Afhayeenka Dowladda Xilgaarsiinta ee Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macalimow.
‘Waxa loo socdo ma ahan Xarun Dowladdeed, ma ahan Askari, waxa halkaan ku basbeelay waa Hooyo sidatay Labo Carruur ah, oo u socotay MCH (Maternal and Child Health) Dhabarkayga ah,” ayuu Afhayeenka Booliiska sii raaiyay Hadalkiisa.
Ugu dambeysti, Qaraxi Maanta dhacay waxaa Mas’uuliyaddiisa sheegtay Kooxda Al-Shabab, waxeyna sheegeen in ay la beegsadeen Saraakiil katirsan Dowladda oo ku sugnaa Kontaroolka laga galo Madaxtooyada Soomaaliya.
Isha Warkan: Hiran Online iyo Xog Ogaal kale